Afar arrimood ka ogow gabadhii Muqdisho lagu afduubay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo May 4, 2018 May 4, 2018 Uncategorized
Ilaalo u shaqaynaysay laanqayrta cas ee caalamiga ayaa ku lug yeelatay afduubka kalkaaliso jarmal ah oo hay’adda uga shaqaynaysay Muqdisho sida ay dawladda Soomaaliya sheegtay.
Hay’adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya Muqdisho ama xafiisyada ku leh, waxay intooda badan ama gabigood ka hawl galaan gudaha xerada Xalane iyo garoonka dayaaradaha ee Aadan Cadde.
Hay’adda Laanqayrta cas kama mid aha hay’adahaas, waxayna xafiis ku leeyihiin magaalada gudaheeda.
Image captionDowladdu waxay aaminsan tahay in mid ka mid ah ilaalada xarunta ICRC ee Muqdisho uu ka dambeeyay afduubkan
ICRC iyo dawladda Soomaaliyaba waxay xaqiijiyeen in ilaalaada hay’adda ay ka dambeeyeen afduubka gabadhaas kalkaalisada ah.
Cabdulxaafid Yuusuf Ibraahim oo ahaa muwaadin Soomaali ah oo mudo 5 bilood oo kaliya ah u shaqaynayey hay’adda ayaa 25 Maarso geeriyooday, ka dib markii qarax loogu xiray gaarigiisa xilli uu a baxayey xafiiska ICRC.
Previous GABDHIHII AY DOWLADII XASSAN SHEEKH U DHOOFISEY DALKA SUCUUDIGA OO MAANTA IDAACADA KA SHEEGEY IN LAGU HAYO KUFSI IYO GARAACID JOOGTO AH
Next Ciro waxaan leeyahay, haddii cid lala xisaabtamayo adiga ayaa lagula xisaabtami lahaa oo Kursi xisbi kale lahaa ku fadhiyey, distoorkana jabiyey, Sh. Aadan Siiro haddii aad kursi siyaasadeed aad la jeceshahay musharaxa koowaad ee wadani ka dhig”